soe min win
သွားတယ်။ ဘာမြင်ခဲ့လဲ သိလား...
ကျွန်တော့် "အဖေ" ကိုလေ....
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 16:00 1 comment: Links to this post
> တရားသူကြီးက သက်သေထွက်ဆိုမယ့်သူကို မှာတယ်။
> "တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန် မလိမ်ညာရဘူး။ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့
> တပ်အပ်မြင်တာကိုပဲ ပြောရမယ်။ တစ်ခြားလူပြောတာကို မပြောရဘူး။ နားလည်လား!"
> "ဟုတ်ကဲ့.. နားလည်ပါတယ်"
> "ကောင်းပြီ... မောင်ရင်ရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ မွေးဖွားရာဇာတိကို အရင်ပြောပါ"
> "တရားသူကြီးမင်း.. ဒါကို ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ အဲဒီတွေကို
> ကျွန်တော့်အမေကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာမို့ပါ"
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:54 No comments: Links to this post
> ဆရာဝန်တစ်ဦးက စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ်။
> ဟင်းမှာနေတုန်း မထင်မှတ်ဘဲ စားပွဲထိုး တင်ပါးကုတ်နေတာကို တွေ့လို့
> ဆရာဝန်စကားကို စားပွဲထိုးပြန်ဖြေလိုက်တာက "ဆောရီး.. menu
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:52 No comments: Links to this post
မြန်မာ ကွန်ပျူတာ User များအတွက် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၊ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ
အဘိဓာန်ဆော့ဝ်ကောင်းလေးတစ်ခု ထွက်လာပါပြီ။ ဖန်တီးသူကတော့ ကိုစိုးမင်း။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ လူငယ်တစ်ဦး။
ခေါင်းစားဖော် ခေါင်းစားဖက် နောက်တစ်ယောက်က ကိုမင်းကျော်။
သူက ဆွီဒင်မှာ။ဖတ်စရာများစွာ ဗဟုသုတယူစရာများစွာ။
သူအားထုတ်မှုတွေလည်း အားကျစရာ ......
အများကောင်းကျိုးအတွက် ပေးဆပ်မှုတစ်ခုကို သူပြုခဲ့ပြီ။
ကိုစေတန်ဂေါ့ နှင့် ကျွန်တော်ကတော့ မိမိတို့စုထားသော
ဒေတာများကို စေတနာဗရပွဖြင့် ထောက်ပံ့လိုက်ကြသည်။
အင်စတောလုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ခုရှာကြည့်သည်။
"စိုင်း" ဆိုတာ .... အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ်လာသည်။
ကဲ ဘယ်လောက် .... လွယ်လဲ ........
တအားရှာရခက်နေရင် ဒီမှာ DOWLOAD အဘိဓာန်
ဤ Post သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ အဖွဲ့သား
မောင်ကွန်ပျူတာ ရေးသားထားသော Post ဖြစ်ပါသည် ။
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:13 No comments: Links to this post
ဟောပြောပွဲတစ်ခု၌ သူဌေးကြီးတစ်ဦးက သူ့အနေဖြင့် ဤမြို့သို့ရောက်ခဲ့စဉ်က ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကလေးတစ်လုံးသာပါရှိခဲ့ကြောင်း ယခုသိန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာနေပြီဖြစ်ကြောင်းများကိုပြောပြပြီးနောက် သတင်းထောက်ကမေးလေသည်။
သတင်းထောက်။ ။ဗျာ Cheesy Cheesy
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:07 No comments: Links to this post
ဆေးရုံသို့ လာရောက်ပြသသောလူနာအား ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းများ ဖတ်ပြီးနောက် ဆရာဝန်က-
ဆရာဝန်။ ။ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို ပြောရမှာ သတင်းကောင်းတစ်ခု၊ သတင်းဆိုးတစ်ခု ရှိတယ်၊ဘယ်ဟာကို အရင်နားထောင်ချင်လဲ။
လူနာ။ ။သတင်းဆိုးကို အရင်ပြောပါဗျာ။
ဆရာဝန်။ ။ခင်ဗျား ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေပြီ..နောက်ထပ် နှစ်နှစ်လောက်ပဲနေရတော့မှာ။
လူနာ။ ။ကျွန်တော့်ဘ၀ကဆိုးပါတယ်ဗျာ၊ သတင်းကောင်းကကောဘာလဲဟင်။
ဆရာဝန်။ ။ခင်ဗျားမှာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက်တစ်လကြာရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေ အကုန်မေ့သွားတော့မှာပါဗျာ။
လူနာ။ ။အမလေး ဆရာရယ် Tongue Tongue
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:06 1 comment: Links to this post
ဇနီးဖြစ်သူ။ ။ ဟင့်အင်း... ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ နေမှာ။ ဒါနဲ့ ရှင်ကော ကျွန်မ
သေသွားရင် နောက် အိမ်ထောင် ပြုမှာလား?
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:03 No comments: Links to this post
"မေမေ၊ ကျွန်တော် ယင်ငါးကောင်ကို သတ်လိုက်တယ်၊ နှစ်ကောင်က အထီး၊
သုံးကောင်က အမ" ဟု ငါးနှစ်သား လူငယ်လေးက သူ့မိခင်ကိုပြောလိုက်သည်။
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 15:01 No comments: Links to this post
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် တစ်နေ့လက်ထပ်ရင် ဘယ်လိုယောင်္ကျားမျိုးကိုရှာပြီး
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:59 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:57 No comments: Links to this post
"မပြောတတ်သေးဘူးရှင် ဆေးသေတ္တာကိုဖွင့်လို့ မရသေးလို့ "
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:56 No comments: Links to this post
တာဇံနှင့် သူ၏တောတွင်းအပေါင်းအသင်းများဖြစ်ကြသော တိရိစ္ဆာန်များသည် ရေကူးရန်မြစ်ကမ်းနားသို့ရောက်လာကြသည်။
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:51 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:50 No comments: Links to this post
ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးစစ်ခန်းအပြင်ဘက်မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ထိုင်စောင့်နေတယ်။ သူတို့အထဲက တစ်ယောက်က ငိုနေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့
ဒုတိယကလေး။ ။မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ငါ့လက်ကို ဖြတ်ပြီးစစ်မှာတဲ့
အဲ့ဒီလို ဖြေလိုက်တော့ ပထမကလေးက ထပြီး ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုပါလေရော။ ဒုတိယကလေးက အံ့အားသင့်စွာနဲ့....
ဒုတိယကလေး။ ။နင်က ဘာဖြစ်လို့ထငိုနေရတာတုန်း?
ပထမကလေး။ ။ငါ့ကိုကျတော့ သူတို့က ဆီးစစ်မလို့တဲ့.... အီးးးးးးးးးးးးးးးးး
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:41 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:39 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:35 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 13:11 No comments: Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 13:15 Links to this post
အညွှန်း ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ, နည်းပညာ
Gtalk translation အကောင့်များ
အောက်က အကောင့်တွေ ကို gtalk add လိုက်ရင် ရပြီ...ဘာသာပြန်ပေးလိမ့်မယ်...အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....fr2en@bot.talk.google.com (ပြင်သစ်ကနေ အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းပေးပါတယ်) en2fr@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေ ပြင်သစ်) hi2en@bot.talk.google.com (ဟင်ဒီကနေအင်္ဂလိပ်) en2hi@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေဟင်ဒီ) it2en@bot.talk.google.com (အီတလီကနေအင်္ဂလိပ်) it2en@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေအီတလီ) ja2en@bot.talk.google.com (ဂျပန်ကနေအင်္ဂလိပ်) ko2en@bot.talk.google.com (ကိုရီးယားကနေအင်္ဂလိပ်) en2ko@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေကိုရီးယား) nl2en@bot.talk.google.com (နယ်သာလန်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2nl@bot.talk.google.com(အင်္ဂလိပ်ကနေနယ်သာလန်) no2en@bot.talk.google.com (နော်ဝေးကနေအင်္ဂလိပ်) en2no@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေနော်ဝေး) pl2en@bot.talk.google.com (ဒါကတောကျွန်တော်လဲမသိဘူးဗျအတ်သာအတ်ထားတာကျွန်တော်မသုံးဘူးဗျ) en2pt@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေပေါတူဂီ) ar2en@bot.talk.google.com (အာရေဗျကနေအင်္ဂလိပ်) en2ar@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေအာရေဗျ) ro2en@bot.talk.google.com (ရိုမေးနီးယားကနေအင်္ဂလိပ်) en2ro@bot.talk.google.com(အင်္ဂလိပ်ကနေရိုမေနီးယား) ru2en@bot.talk.google.com (ရုရှားကနေအင်္ဂလိပ်) en2ru@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေရုရှား) sv2en@bot.talk.google.com (ဆွီဒင်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2sv@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေဆွီဒင်) zh2en@bot.talk.google.com (တရုတ်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2zh@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေတရုတ်) zh-hant2en@bot.talk.google.com (ရိုးရာတရုတ်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2zh-hant@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေရိုးရာတရုတ်) zh-hant2zh@bot.talk.google.com (ရိုးရာတရုတ်ကနေနိုင်ငံတကာတရုတ်) zh2zh-hant@bot.talk.google.com (နိုင်ငံတကာတရုတ်ကနေရိုးရာတရုတ်) bg2en@bot.talk.google.com (ဘယ်ဂျီလယံကနေအင်္ဂလိပ်) en2bg@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေဘယ်ဂျီလယံ) cs2en@bot.talk.google.com (ချက်စကိုလိုဗီးယားကနေအင်္ဂလိပ်) en2cs@bot.talk.google.com(အင်္ဂလိပ်ကနေချက်) en2da@bot.talk.google.com (ဒါလဲဘာလဲမသိဘူးဗျသုံးဘူးဘူး) de2en@bot.talk.google.c(ဂျာမန်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2de@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေဂျာမန်) de2fr@bot.talk.google.com (ဂျာမန်ကနေပြင်သစ်) fr2de@bot.talk.google.com(ပြင်သစ်ကနေဂျာမန်) el2en@bot.talk.google.com (ဂရိကနေအင်္ဂလိပ်) en2el@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကနေဂရိ) es2en@bot.talk.google.com (စပိန်ကနေအင်္ဂလိပ်) en2es@bot.talk.google.com(အင်္ဂလိပ်ကနေစပိန်) fi2en@bot.talk.google.com (ဖင်နစ်ရ်ှကနေအင်္ဂလိပ်) en2fi@bot.talk.google.com (အင်္ဂလိပ်ကဖင်လန် အဲလေယောင်လို့ ဖင်နစ်ရှ်) en2mm5@mmgeeks.org <en2mm5@mmgeeks.org>(အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာ)
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 10:38 Links to this post
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 14:02 Links to this post
၄။ ပြီးရင် ဘေးက Settings ထဲသို့
၇။ အခုဆိုရင် စပြီးတော့ Key Board ညာဘက်မှ
နံပါတ် ကီးများဖြင့် Mouse Pointer လေးကို ရွှေ့နိုင်ပါပြီ။
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 13:40 No comments: Links to this post
ဖိုဒါကို အခြားလူ ဖွင့်ကြည့်လို့ မရအောင်လုပ်မယ်
ပထမဦးဆုံး ကိုယ်လုပ်မယ့် ဖိုဒါက NTFS နဲ.ပိုင်းထားတဲ့ Partation ပေါ်မှာရှိရပါမယ်။ ပြီးရင် My Computer ကိုဖွင့်။ Menu Bar က View Tab ကို ၀င်ပါ။ ဟိုးအောက်ဆုံးစာကြောင်း Use sinple file sharing ( Recommended ) ဆိုတဲ့ ချက်ဘောက်လေးကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးထားရပါမယ်။ ပြီးရင် OK နဲ.ထွက်။ ကဲစမယ် ကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်နှိပ် ။ Sharing and Security ဆိုတာကိုဝင်။ Security ဆိုတဲ့
Tab မှာ Advance ကို ကလစ်နှိပ်။ ပြီးရင် အောက်နားက Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these with explicitly defined here ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Remove လို.ပြော။ Apply ၊ OK ၊ OK ပေါ့။ ဒါဆို ကိုလုပ်ထားတဲ့ ဖိုဒါကို ဘယ်သူမှ ဖွင့်လို.လဲရမှာ မဟုတ်သလို Delete လဲလုပ်လို.ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 13:21 Links to this post
Floder Options ပျောက်ဆုံးခြင်း
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:54 AM (http://chitoophoto.blogspot.com)
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 07:43 No comments: Links to this post
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  Desktop ပေါ်က Icon လေးတွေကို လှပပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ
မှတ်ချက် ။ ။ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ရက် 30 ပဲ ရတယ်ခင်ဗျ ( ဘယ်လို register လုပ်ရမယ်တော့ မသိဘူး ဟီးးးးးးးး) ကျွန်တော်ကတော့ ရက် 30 ပြီးသွားရင် အဲ့ဒါကို ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ ပြန် Install လုပ်လိုက်တာပဲ :P
သူငယ်ချင်းတို့ အသုံးပြုတဲ့ Gtalk တွေကို အမြဲတမ်း idle ဖြစ်နေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ
သူငယ်ချင်းတို့ ကွန်ပြူတာပေါ်က ညာဘက်ထောင့်က Taskbar ပေါ် မှာ ရှိတဲ့ Gtalk Icon လေးပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပြီး always Idle ဆိုတာကို ရွေးထားလိုက်ပေါ့
ဒါဆို သူငယ်ချင်းတို့ Gtalk လေးက အမြဲတမ်း Idle ဖြစ်နေပြီပေါ့ :P
ဒါကတော့ Firefox Browser Version အသစ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် လိုချင်ရင် ဒီနေရာ Download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  ကွန်ပြူတာမှာ အလှဆင်ဖို့အတွက် နာရီလေးတွေပါ ဒါက install လုပ်ပြီးသားကို တင်ထားတာဆိုတော့ အခု ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  C:ထဲက Program file ထဲမှာ ထားလိုက်ပါ
ပြီးရင် အဲ့ဒီထဲက ClocX.exe ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် နာရီလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် အဲ့ဒီ နာရီပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီးတော့ option ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ နာရီပုံလေးတွေရွေးလိုက်ပါ ..... :P
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  ကွန်ပြူတာမှာ နှင်း တွေကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ မှာ Download ရယူပြီးတော့ ရလာတဲ့ .exe ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့  ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ လှပတဲ့ ဆောင်းတွင်းလေး ဖြစ်သွားပါပြီ .......
ဒါလေးကတော့ ကွန်ပြူတာပညာကို စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ လေ့လာသူတိုင်း သိသင့်တဲ့ လမ်းညွှန်ပြ မြေပုံလေးဖြစ်ပါတယ် လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာ မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်
Remoter Installation Service
Network ပေါ်မှ တဆင့် Window တင်ခြင်း ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
Remote Desktop Environment ( Real VNC Version 4.1.1 )
Real VNC ( Virtual Network Computing ) ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
Active directory တည်ဆောက်ခြင်း ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
ကွန်ပြူတာ တပ်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် အခြေခံသဘောတရားများ
virus များနှင့် ကခုန်ခြင်း ( စီခရေဇီ ရေးသားဝေမျှသည် )
Deep Freeze ထည့်သွင်းခြင်း
C++ Volume 1,2,3
Volume 1 ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
Volume2ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
Volume3ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲရန်
တင်ပို့သူ soe min win ဒီအချိန်မှာ 03:41 No comments: Links to this post
အညွှန်း Software များ
ဘာမြင်ခဲ့လဲ သိလား... အဖေက ကျွန်တော့်ကို နိုက်ကလပ်...
အမေပြောထားလို့ပါ...... > တရားသူကြီးက သက်သေထွက်ဆိုမ...
ဟင်..... > ဆရာဝန်တစ်ဦးက စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ...
Software များ (1)
တရားတော်များ အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်) အရှင်ဆန္ဒာဓိက အရှင်ရာဖိန္ဒ (ရဝေနွယ်အင်းမ)